Apple company ရဲ့ Mobile Chip ဒီဇိုင်နာဟောင်းတစ်ဉီးဖြစ်သူကိုငှားရမ်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google! – AsiaApps
Apple company ရဲ့ Mobile Chip ဒီဇိုင်နာဟောင်းတစ်ဉီးဖြစ်သူကိုငှားရမ်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google!
December 26, 2017 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Apple company ရဲ့ Mobile Chip ဒီဇိုင်နာဟောင်းတစ်ဉီးဖြစ်သူကိုငှားရမ်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Google!
Google company ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းအငယ်ကပဲ Apple company မှာ Mobile Chip Designer ဟောင်းတစ်ဉီးဖြစ်သူ John Bruno ကိုငှားရမ်းလိုက်တာပါ။ Bruno ဟာ Apple company မှာတုန်းက Silicon competitive analysis group မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Apple company ကြီးကိုမရောက်ခင် AMD (Advanced Micro Devices) မှာ Engineer ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် ATI (Allegheny Technologies) အတွက်လည်း Chip Designer နေရာကလုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံအားဖြင့်ကြည့်ရင် မနည်းလှတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ အခုဆိုရင် Google company မှာ System Architect နေရာကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Google အနေနဲ့ Apple company ကဝန်ထမ်းဟောင်းကို ငှားရမ်းတာ ပထမဉီးဆုံးအကြိမ် မဟုတ်ပါဘူး။
၂၀၁၇ ဇွန်လ တုန်းကလည်း တစ်ခါငှားရမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ငှားရမ်းခဲ့တဲ့လူကတော့ Manu Gulati ဆိုတဲ့ အိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်ပြီး Chips System အတွက်ပဲငှားရမ်းခဲ့တာပါ။ Manu Gulati ဟာလည်း Apple company မှာ ဒီဇိုင်နာအဖြစ် ၈ နှစ်တာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံများတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဒီဇိုင်နာတွေကို Google ခေါ်ယူရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ သူတို့ ရဲ့ Smart phone တွေဖြစ်တဲ့ Pixel Models တွေမှာ ကိုယ်ပိုင် Mobile chips design တွေဖန်တီးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဒီဇိုင်နာတွေကြောင့် နောက်နှစ် အစောပိုင်းလောက်မှာ Google အနေနဲ့ Pixel model အသစ်ကို Chips design လန်းလန်းနဲ့ ထွက်ရှိနိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Google Poaches Top Mobile Chip Designer John Bruno From Apple https://t.co/sMS88wx36Y by @waxeditorial pic.twitter.com/Z7LwxZ5hAm
— MacRumors.com (@MacRumors) December 23, 2017
Android, Google, Processor
သင့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေကို မျက်နှာတပ်ပေးမယ့် Cool Finger Faces – Photo Fun!
လာမယ့် New Year ကစပြီး mobile phone အချို့မှာ အသုံးပြုနိုင်တော့မှာ မဟုတ်တဲ့ WhatsApp